China SPC Floor SM-056 Ukwakha kanye nefektri | I-Aolong
Incazelo: 1210 * 183 * 5.5mm
Khetha phansi, naka amaphuzu ayisihlanu ayisihluthulelo 1, bheka izinto zokusetshenziswa zaphansi. Ngokuvamile, kunezitezi eziqinile zokhuni, ukuhlanganiswa kwaphansi kokhuni oluqinile kanye naphansi okuqinisiwe. Ukukhethwa kwamaphansi kuncike ekutheni zithini izinto zokusetshenziswa, ukuthi kusetshenziswa hlobo luni lokhuni kanye ne-super glue.
2. Bheka isitifiketi saphansi kanye nesitifiketi somkhiqizo wokuvikelwa kwemvelo. Khumbula ukubona isitifiketi saphansi, phansi kufanele okungenani kufinyelele ezingeni likazwelonke le-E1, zama ukukhetha kangcono kunezinga lomkhiqizo elijwayelekile likazwelonke le-E0, noma isitifiketi sekhwalithi yomkhiqizo wezinga lezempilo lezingane.
3. Bheka ubuchwepheshe bokukhiqiza. Ubuchwepheshe obuhle bokukhiqiza bungaqinisekisa ikhwalithi. Isibonelo, i-flooring eqinile yokhuni, i-composite flooring solid flooring kanye ne-flooring eqinisiwe ye-flooring yemvelo konke kwamukela ubuchwepheshe be "zero aldehyde manufacturing intelligent". Impahla eluhlaza yi-zero aldehyde, futhi yonke inqubo yokukhiqiza nokukhiqiza ingu-zero aldehyde ukungcoliswa kwemvelo, okuvikela kakhulu imvelo.
4. Bheka iphethini yaphansi. Ngokwesitayela sokuklanywa komhlobiso, isibonelo, isitayela seNordic singasebenzisa iphansi lombala welogi.
5. Bheka imininingwane yaphansi. Ngokwendlela yokunamathisela ukukhetha imininingwane yaphansi, njenge-herringbone collage encane engu-780 × eyikhulu namashumi amabili × 11mm
Ubukhulu Sekukonke 5.5mm
Ukucaciswa kosayizi 1210 * 183 * 5.5mm
Langaphambilini SPC Phansi SM-055
Olandelayo: SPC Phansi SM-057
SPC Phansi SM-057
SPC Phansi SM-051
SPC Phansi SM-052
SPC Phansi SM-058